अधिकारकर्मीको रिले अनशन स्थगित
काठमाडाै‌,साउन २९ । महिला अधिकारकर्मीले संविधानमा महिलाको आत्मसम्मान सहितको कानुनी पहिचान र समान सहभागिताको मागगर्दै विगत १३ दिनदेखि काठमाडौंमा जारी रिले अनशन आजदेखि स्थगित गरेका छन् ।
नयाँ संविधानले पनि महिलालाई दोस्रो दर्जामै राख्यो : अधिकारकर्मी
कैलाली २९ भदौ । आमाको नामबाट सन्तानले सजिलैसंग नागरिकता पाउनुपर्ने माग अन्ततः नयाँ बन्ने संविधानले सम्बोधन गरेन । नागरिकता सम्बन्धि प्रावधान रहेको पुरानै धारा ११ पारित भएपछि यस क्षेत्रका महिला नेता तथा महिला अधिकारकर्मी निराश बनेका छन् ।
४० सिट महिलाका लागि चक्रिय सिद्धान्त अनुसार सुनिश्तिच गर्नुपर्ने माग अस्वीकृत
ललितपुर, भदौ २९ । संविधान सभामा संविधान विधेयक र त्यसमा परेका संशोधन प्रस्तावमाथिको निर्णायक मत दिने क्रम जारी छ । अहिलेसम्म १०१ वटा धारा पारित गरी अहिले एकैछिनका लागि बैठक स्थगित भएको छ । आजको बैठकमा प्रत्यक्षतर्फ ४० सिट महिलाका लागि चक्रिय सिद्धान्त अनुसार सुनिश्तिच गर्न माग गर्दै सभासद कुन्ती कुमारी शाहीले राखेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ ।
‘बच्चा पाल्न समुद्र पार गएँ, तलब पाइन’
काठमाडौं,भदौ २९ । सबैका अगाडि न्याय माग्दै हिड्न थालेपछि साहुले गाडीमा राखेर अर्कै ठाँउमा लैजान लाग्दा उनि बीच बाटो बाटै भागिन । बाटोमा गाडी रोकेर साहु अफिसमा गएको मौका छोपी भागेकी उनले बाटोमा भेटिएका एकजना नेपालीको सहयोगमा दुतावास पुग्न सफल भईन । दुतावास पुगेको चार महिनापछि नेपाल आएकी उनले अहिले वैदेशिक रोजगार विभागमा आफू बेचिएको मुद्धा दर्ता गरेकी छन् ।
तीन जना महिलालाई अस्थायी पाइलटको इजाजतपत्र
पोखरा, भदौ २९ । नेपाल नागरीक उड्डयन प्राधिकरणले १०३ जना पाइलटहरूलाई अस्थायी प्याराग्लाईडीङ पाइलटको इजाजत पत्र वितरण गरेका हुन् । प्याराग्लाईडीङ पाइलटको इजाजत पत्र पाउनेमा जम्मा ३ जना महिला छन् भने अरु सबै पुरुष रहेका छन् । इजाजत पत्र पाउने ३ जना महिला पाइलट प्रतिभा वोगटी, तृशा श्रेष्ठ र कृशु पौडेलले हुन ।
रुकुममा पाँच हजार भन्दा बढी बालबालिका प्राथमिक शिक्षाबाट वञ्चित
रुकुम, भदौ २९। रुकुममा ५ हजार ७ सय ६५ बालबालिका प्राथमिक शिक्षाबाट वञ्चित रहेको पाईएको छ। राष्ट्रिय बालदिवस २०७२ को अवसर पारेर बाल कल्याण समिति रुकुमले आयोजना गरेको जिल्लामा बालबालिकाका समस्या र न्युनिकरणका उपाय विषयक अन्तरक्रियाकार्यक्रममा यस्ताे तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो।
सन्दर्भ राष्ट्रिय बाल दिवस : बालबालिकालाई किन सिटमा नबसाउने ?
ललितपुर, भदौं २९। उनी सातदोबाटोबाट बानेश्वर जाने टेम्पुमा बच्चा लिएर यात्रा गर्दै थिइन् । टेम्पो चालकले भने, ‘ए दिदी ! त्यो बच्चा किन सिटमा राखेको ? बच्चा देखेपछि मान्छे चढ्दैनन् । उठाई हाल्नुस् ।’ बिमला भन्छिन्, ‘म ठूलो अपराधी हो जस्तो गरेर चालकले हप्काए । त्यो सुनेर बच्चा उठ्यो । मैले बस्न लगाउँदै भने, ‘किन बच्चा मान्छे होइन ? ’ चालकले रिसैरिसमा भने, ‘पैसा तिर्नुहुन्छ ? ’ मैले जवाफ फर्काए, ‘गाडी चढेपछि पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने मलाई थाहा छ भाई ।’ त्यसपछि उनी चुप लागे ।
नयाँ संविधान असोजमा आउँछ : एमाले महासचिव पोख्रेल
काठमाडौं,भदौ २८ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका महासचिव ईश्वर पोख्रेलले असोज ३ गते राष्ट्रपतिलाई निमन्त्रणा गरेर औपचारिक रुपमा संविधान सभाबाट नयाँ संविधान घोषणा गर्ने तीन दलका शिर्ष नेताको बैठकले निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
नागरिकता सम्बन्धि विभेदकारी व्यवस्था पारित
काठमाडौं, भदौ २८ । आम महिलाले आमाको नाममा सन्तानले सजिलै नागरिकता पाउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा गर्न माग गर्दागर्दै माग विपरीत संविधानको नागरिकता सम्बन्धि प्रावधान रहेको धारा ११ पारित भएको छ । पारित भएको नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्थामा आमाले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिँदा बाबुको पहिचान खुलाउनैपर्ने व्यवस्था भएपनि बाबुले चाहिँ सन्तानको आमाको पहिचान खुलाउनु पर्दैन । पारित व्यवस्था अनुसार बाबुको पहिचान नभएको जस्तै
दुई वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने पक्राउ
धनगढी, भदौ २८ । कैलालीमा एक दुई वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् ।
टेलिभिजन हेर्न आएकी छिमेकी बालिकालाई १७ वर्षीय राजेश विकले शनिबार दिउसो बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ । बालिकाको धनगढीस्थित सेती अञ्चल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । उनको यौनागंमा चोट लागेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जनाएका छन् ।
« Previous 1 … 708 709 710 711 712 … 777 Next »